प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्दै हमाल, माधव नेपालको कोटा काटियो — Imandarmedia.com
प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्दै हमाल, माधव नेपालको कोटा काटियो
काठमाडौ। प्रधानमन्त्रीका शेरबहादुर देउवाले अन्ततः गरैसांसदलाई मन्त्री बनाइ छोड्ने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । उनी सपथ खान नेपालगन्जबाट काठमाडौं आइसकेका छन् ।
लामो प्रतीक्षा र विवादपछि दलहरूले मंगलबार मन्त्रालय बाँडफाँट गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा २५ सम्म सदस्य हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारसँग २१ मन्त्रालय छन् । त्यसैले एक प्रधानमन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीबाहेक मन्त्रिपरिषद्मा २१ मन्त्री हुन सक्छन् ।
यसमध्ये कांग्रेसले ७, माओवादीले ५, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ४÷४ पाउने गरी २० मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको छ। उटा मन्त्रालय किन बाँकी राखिएको हो  ? गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारीअनुसार शुक्रबार शपथग्रहण हुनेछ, अवस्था परिवर्तन नभएमा त्यहाँ तपाईंले गजेन्द्र हमाललाई पनि देख्नुहुनेछ ।’
‘कोटा कुन दलबाट घटाउने विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत ढिलाइ भयो । अन्तिममा देउवाको जोडबलमा एउटा मन्त्रालय साझा रूपमा छुट्याएर २० मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्री बन्ने सम्भावना भएपछि हमाल एक साताअघि काठमाडौं आएका छन् । आफूलाई मन्त्री बनाउन लागिएको विषय हमालले पनि इन्कार गरेनन् । ‘मिडियामा त खुबै चर्चा भएको छ । मन्त्री बनाइदिए त राम्रै हुने थियो तर आधिकारिक जानकारी नआएसम्म मन्त्री भइहाल्छु भन्न मिलेन,’ बिहीबार साँझ उनले भने ।
कांग्रेस नेता सुशील कोइरालासँग मनमुटाव बढेपछि देउवा पक्षमा लागेका उनी कांग्रेस विभाजनपछि प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको जिल्ला सभापति बनेका थिए । उनी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए, तर माओवादी नेता तिलक परियारसँग पराजित भए ।
२०१० फागुन ८ मा जन्मेका हमाल अहिले पार्टीको क्रियाशील सदस्य मात्र हुन् किनकि कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनमा उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नै पराजित भएका थिए । उता प्रदेशसभा सदस्य भाइ सुरेन्द्र हमाल पनि कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनीमा मन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ ।
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको समाचार बाहिरिएपछि राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रबाट गम्भीर आपत्ति प्रकट भएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले गत सोमबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर गम्भीर चासो राखेका थिए ।
करिब २० मिनेटको संवादमा हमालको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैंले निकालेका थिए । ‘समाचारमा क–कसको नाम आएको छ ? एक दीपक तिमिल्सिनाको नाम आएको छ । अर्को गजेन्द्र हमालको नाम आएको छ । गजेन्द्र हमाल भनेको त शेरबहादुरसरहको कांग्रेस नेता हो नि । उसका लागि मलाई जोड्नुपर्छ र ? उसलाई मैले बनाउनुपर्छ र ? मैले बनाएर बन्ने हुन्छ र  ?’ सहभागी एक अधिवक्ताका अनुसार जबराको भनाइ थियो ।
सर्वोच्चका सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले बारका पदाधिकारीसँग दिएको अभिव्यक्ति नै आश्चर्यजनक मान्छन् । ‘हमाल त शेरबहादुरसरहको कांग्रेस नेता हो भनेर उहाँले किन भन्नुभयो ? कुन दलमा कुन नेताको हैसियत के हो भनेर छुट्याउन उहाँले कसरी मिल्छ ? हमाल देउवासरहको नेता हो भन्ने उहाँलाई कसरी थाहा भयो ?’
न्यायाधीश भन्छन्, ‘सरकारमा को व्यक्ति हुँदा ठीक वा बेठीक के हुन्छ भनेर दृष्टिकोण दिने काम उहाँको होइन । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो सबैभन्दा बढी उहाँकै दायित्व हो ।’सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले र पछि विज्ञप्तिबाट सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहालले संविधानविपरीतको त्यस्तो काम हुनै नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
तर, त्यसको एक साता नबित्दै उनै हमाललाई नियुक्ति गर्न लागिएको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी यो घटनाले हिजो जुन सूचना बाहिरिएर विवाद भएको थियो, त्यो कतै सत्य त होइन भन्ने आशंका जन्माएको बताउँछन् । ‘सरकार निर्माणको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले ठट्टा नै गरेर भए पनि आफ्नो दृष्टिकोण दिनु हुँदैन,’ अधिकारीले भने ।
सत्तारूढ दलहरूबीच साझा सहमति भए पनि हमाल मन्त्री नियुक्त भए न्यायालयको निष्पक्षता, संविधानको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक विधिमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै संविधानविद् चिन्तित छन् । संविधानले मूलतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिमात्र मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुनै विषय विज्ञलाई तत्कालै राख्नुपर्ने अवस्थामा बाटो खुलाउन मात्र धारा ७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, त्यस्तो मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुन्छ । संविधानविद् अधिकारी कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्मा अत्यावश्यक पर्ने विशेषज्ञता भएको व्यक्ति दुवै सदनमा नभएको अवस्थामा बाहिरबाट विज्ञ लैजान संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् ।
‘अहिले संसद्बाहिरबाट मन्त्री हुने व्यक्तिका रूपमा जसको नाम आएको छ, उहाँमा न विशेष प्रतिभा छ, न विज्ञता छ, न मन्त्रिपरिषद्मा उहाँको उपस्थितिले सरकारको प्रजातान्त्रिक उद्देश्य नै पूरा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अभ्यासले संसद्भित्र भएका विकल्पहरूको अवमूल्यन भएको छ । मन्त्री पदमा दाबी भएका दुवै संसद्का सदस्यहरूले नै यसको सबैभन्दा बढी विरोध गर्नुपर्छ ।’
अधिवक्ता मेघराज पोखरेल अपवादस्वरूप प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न थालिएको बताउँछन् । ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद्मा अत्यावश्यक हुने विषय विज्ञ संसद्मा नभएको अवस्थामा अपवादस्वरूप मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रा दलहरूले यसलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्ना मान्छेलाई ६ महिने मन्त्री बनाउने गलत अभ्यास सुरु हुन थालेको छ ।’
सर्वोच्च बारका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आफूहरूले त्यस विषयमा गम्भीर भएर कुरा राखिसकेको र सर्वोच्चबाट प्रेस विज्ञप्तिसमेत आइसकेपछि फेरि प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्दै छन् भन्ने विश्वास नलागेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, कस्ता–कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाउने रु कुन–कुन दलबाट मन्त्री बनाउनेजस्ता विषय प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकार हुन् ।
यो विषय राजनीतिक हो । त्यसको जस–अपजसको भागीदार प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुपर्छ, बाहिरबाट मन्त्री बनाइयो भने यसमा प्रधानन्यायाधीशको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दोष बढी हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘हाम्रो गम्भीर असहमति प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारिणीसँग भाग खोज्ने कुरासँग छ । कार्यकारिणीले गरेका निर्णयउपर मुद्दा पर्दा त्यस्ता भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीशबाट कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने रु’ उनले सर्वोच्चको विज्ञप्तिलाई खण्डन गर्ने प्रमाण र आधार नआएसम्म आफूहरू चुप बस्ने बताए ।
‘भाग खोजेको कुरा प्रमाणित हुने प्रमाण आए भने के गर्ने भन्नेबारेमा हामी ठोस रूपमा अघि बढ्छौं,’ शाक्यले थपे । दबाबबीच प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालबाट खण्डन पनि गराएका थिए । त्यतिमात्र होइन, कानुन, न्याय तथा संसदीयमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत समाचारको खण्डन गरेका थिए । तर, हमाल उनैको सहकर्मीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा भित्रिन थालेका छन् ।
एसको भागमा परेका ४ मन्त्रालयमध्ये कानुनमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई अघि सार्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाउन खोजिएको थियो । तर यसै पनि जम्मा चार मन्त्रालय दिने र त्यसमा पनि बन्दी आफ्नोतर्फ पार्न भनिएपछि एस अध्यक्ष नेपालले विरोध गरेका थिए ।
चारभन्दा कम मन्त्रालय लिएर सरकारमा नजाने चेतावनी नेपालले दिएपछि कानुन मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेकपा ९एस० लाई दिने गरी समझदारी भएको छ । ‘कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै दलमा परेपछि बन्दीलाई मन्त्री बनाउनेरनबनाउने भन्ने हाम्रो विषय भएन,’ एसका एक नेताले भने, ‘चार मन्त्रालयमा हामी पार्टीका सांसदलाई पठाउँछौं । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदैनौं ।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सिद्धान्ततः राम्रो पनि होइन ।’ कांग्रेस नेताहरूका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेसभित्रै गुटगत असन्तुष्टि बढेपछि बन्दीको नाम मन्त्रीमा पर्ने सम्भावना कम छ । ‘अब कानुनमा कांग्रेसले दिलेन्द्र बडूलाई पठाउने सम्भावना छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट